आजदेखि भेरोसेल खोपको पहिलो र दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु, कुन-कुन जिल्लामा लगाइँदैछ ? - Arthatantra.com
काठमाडौँ । आज (सोमबार)देखी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पहिलो र दोस्रो मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरेको छ ।
कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा ११ दिनसम्म लगाइने भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका अनुसार दोस्रो मात्रा आजदेखि तीन दिनसम्म भेरोसेल खोप लगाइने छ ।
अहिले पहिलो मात्रा लगाउनेलाई कात्तिक ४ देखि १४ गतेसम्म दोस्रो मात्रा खोप लगाइने छ । यो पटक सरकारले ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, रसुवा, बाजुरा र दार्चुलामा १८ वर्षमाथिका नागरिकलाई खोप लगाउने भएको छ ।
यता चितवन र काभ्रेमा ३५ वर्षमाथिका नागरिकलाई खोप लगाइने छ । १८ वर्ष माथिका खोप लगाउन छुटेका विद्यार्थीलाई पनि खोप दिइने छ । यता काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, सर्लाही, रामेछाप र अछाममा ४० वर्ष माथिका नागरिक र १८ वर्षमाथिका विद्यार्थीलाई खोप दिइने छ ।
मुस्ताङ, मनाङ र रुकुमपूर्व बाहेकका जिल्लाका ३५ वर्षमाथिका सबै नागरिक र १८ वर्षमाथिका विद्यार्थीलाई खोप दिइने छ । यसअघि खोप लगाउन छुटेका अग्रपङ्क्तिमा खटिने कर्मचारी, अत्यावश्यक सेवा, पर्यटकीय क्षेत्र, शिक्षक, होटलमा काम गर्ने नागरिकलाई पनि खोप दिइने छ ।
वि.सं.२०७८ असोज ४ सोमवार १०:४० मा प्रकाशित
अघिल्लाे घट्यो कुखुराको मासुको मूल्य, अब प्रतिकिलो कति ?
पछिल्लाे किसानको गुनासोः ‘सरकारले न मलको बन्दोबस्त गर्न सक्यो,न विकल्प खोज्यो’